Indlu yase-JJ engasolwandle i-Pranburi - I-Airbnb
Indlu yase-JJ engasolwandle i-Pranburi
Tambon Pak Nam Pran, Chang Wat Prachuap Khiri Khan, i-Thailand
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ksnn
Indlu engasebhishi ePranburi endaweni enokuthula, inakho konke okudingayo ukuze ujabulele iholidi ngasogwini lolwandle...ubumfihlo kanye nokunethezeka kunehhotela uma ungathanda ukuzizwa 'usekhaya kude nasekhaya. Imisebenzi eminingi eduze nomgwaqo osogwini onesitolo esinesitolo, i-massage, isikole sokuntweza i-Kite, izindawo zokudlela zasendaweni nokudla kwase-Europe.Uma ungathanda ukuba nesidlo sasekuseni saseMelika izinyathelo ezimbalwa ukusuka ekhaya uye endaweni yokudlela yase-Pranberry(ngokuphambene)
Indlu eyodwa engasebhishi enokubukwa kolwandle. Indlu yayine-AC, amasofa kanye ne-TV. I-wifi yamahhala -Ikhishi lifika liphelele nezinto zokupheka nezinongo, okuhlanganisa umshini oconsisa ikhofi, uthosi, Igedlela, iMicrowave, isiqandisi, 45” 4K LCD TV, Amathawula Okugeza, Izinto zangasese (Ishampoo, ijeli yeShowa),. Ingadi engemuva ebiyelwe ngokugcwele ifakwe okokusebenza kwe-BBQ, okuhlanganisa itafula langaphandle nezihlalo ezinokubukwa kolwandle, iyindawo ekhethekile yokuphumula ngengilazi yewayini ekupheleni kosuku oluhle.
Kuzo zonke izindawo kukhona ikhaya langasese, amahhotela, izindawo zokungcebeleka, izindawo zokudlela zasolwandle, izindawo zokudlela zasendaweni, ukubhucungwa, isikole sokuntweza i-Kite, isitolo esilula.
Xhumana naye ngebhokisi lokungenayo le-Airbnb noma nge-imeyili ku-pranberryearth@gmail.com
Hlola ezinye izinketho ezise- Tambon Pak Nam Pran namaphethelo